Bogga ugu weyn 15 Kayd Oo Saliid Ugu Fiican Oo La Iibsan Karo 2022 | Hagaha Maalgashiga
Isha Sawirka: bullishbears.com
Waa Maxay Kaydka Saliidda Ugu Fiican Si Loo Iibsado?
#3. Shirkadda Royal Dutch Shell
#5. Shirkadda Teekay Tankers Ltd.
#7. Shirkadda TORM PLC
# 10. Kheyraadka EOG
#11. Tamarta Canacol
#12. Tamarta Diamondback
#13. Shirkadda Parsley Energy Inc.
#14. Shirkadda Renewable Energy Group Inc.
#15. Shirkadda Whiting Petroleum Corp.
Kaydka Saliidda Ugu Fiican Si Aad U Iibsato
Suuqa saliida wuxuu noqon karaa mid aad u jahawareersan maalgashadayaasha khibrada leh iyo kuwa cusub labadaba isbeddelka qiimaha joogtada ah. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah waa hab wanaagsan oo lagu kala duwanaan karo faylalka maalgashiga, maalgashadayaasha waxay raadiyaan kaydka saliida ee ugu fiican si ay u iibsadaan ama u maalgashadaan.
Si ka sii daran, burburka dhaqaale ee 2022 ee uu sababay masiibada, ayaa horseeday hoos u dhac ku yimid qiimaha dalabka, iyo shirkado badan oo saliid ah ayaa si weyn u saameeyay. Tani waxay sababtay in maal -gashadayaal badani raadiyaan khatarta hooseysa, kaydka abaal-marinta sare leh si loo maalgashado. Iyo qaar ka mid ah kaydka saliidda oo shaxda ugu sarreeya.
Saliidda iyo gaaska ayaa weli ah 69% isticmaalka tamarta Mareykanka, sidaa darteed waxaa muhiim ah in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo kaydka saliidda ee aad rabto maal gudaha.
Si kastaba ha noqotee, waa kuwan kaydka ugu fiican ee laga iibsado suuqa Mareykanka laga bilaabo Diseembar 2022.
Maalgelinta kaydka saliida waa hab wanaagsan oo lagu kala duwanaan karo faylalka maalgashigaaga. In kasta oo ay la timaaddo khataro, haddana waxa jira kayd saliid ammaan ah oo soo celin kara lacagtaada.
Marka, haddii aad rabto inaad ogaato kaydka ugu fiican ee aad ku maalgashan karto dakhli dhakhso leh, hoos ka fiiri.
Exxon Mobil waa mid ka mid ah kuwa bixiya tamarta ugu badan ee si guud looga ganacsado iyo soo saarayaasha kiimikada. Waxay horumariyaan oo adeegsadaan farsamooyinka jiilka xiga si ay uga caawiyaan si xilkasnimo leh inay daboolaan baahiyaha sii kordhaya ee adduunka ee tamarta iyo alaabada kiimikada oo tayo sare leh.
Sanadihii la soo dhaafay, Exxon Mobil wuxuu ka soo gudbay suuq-geynta gobolka ee kerosene una beddelay tamar horumarsan iyo hal-abuure kiimiko, iyo mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee sida weyn looga ganacsado adduunka.
Saamiyada Exxon Mobil waxaa lagu kala iibsanayaa suuqa sarrifka NASDAQ sida (XOM) at $ 38.99 +0.49 (1.27%). Hantidhowrka ayaa horay u xirnaa $ 38.50 oo leh dabool suuq $ 165 bilyan iyo saamiga PE (TTM) ee 50.28.
Iyadoo la sii deynayo rubuca afaraad dulucda Sannadka 2021, Guddiga Agaasimayaasha Exxon Mobil wuxuu ku dhawaaqay saamiga lacagta caddaanka ah $ 0.87 senti saamiga saamiyada guud, oo la bixin karo Diseembar 10, 2021.
Si loo ilaaliyo lacag -bixintooda, shirkadu waxay goynaysaa kharashaadka iyo shaqooyinka. Exxon ayaa horay u jartay maalgashigii $ 10 bilyan illaa iyo sanadkan.
Total waa shirkad shidaal iyo gaas oo caalami ah oo Faransiis ah. Waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah toddobada shirkadood ee shidaalka “Supermajor” ee adduunka. Shirkaddu waxay xoogga saartaa silsiladda saliidda iyo gaaska.
Laga soo bilaabo saliidda cayriin iyo sahaminta gaaska dabiiciga ah ilaa wax -soo -saarka, dhalinta korontada, gaadiidka, sifaynta, suuqgeynta waxsoosaarka batroolka, iyo ka ganacsiga saliidda ceyriin iyo badeecadda.
Total sidoo kale waa soo-saare kiimiko oo baaxad weyn leh oo xafiiskeedu madax ka yahay Total Total ee degmada La Défense ee Courbevoie, galbeedka Paris. Shirkaddu waxay mas'uul ka tahay 0.95% gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee warshadaha caalamiga ah laga bilaabo 1988 ilaa 2015.
Saamiga Guud waxaa lagu ganacsadaa sida (WADARTA SE) oo ku yaal tusaha suuqa saamiyada Euro Stoxx 50 iyo suuqa sarrifka saamiyada ee New York.
TOTAL SE ayaa ku jirta $ 43.82 +0.39 ( +0.90%) suuqa New York iyo € 36.71 +0.38 (1.05%) suuqa Paris. Waxa kale oo ay leedahay a saddexdii biloodba mar mushaarka 0.66 €/wadaag.
TOTAL SE ayaa la xidhay € 36.710 ee Paris oo leh mugga saamiga 7,736,394.
Markaad ku jirto suuqa New York, TOTAL SE waxay leedahay qiime xiritaan $ 43.43, daboolka suuqa $ 115.027 bilyan, iyo mugga 2,626,466. Waxa kale oo ay leedahay saami -qaybsiga 3.08 (7.32%).
Royal Dutch Shell waa koox caalami ah oo tamar iyo shirkado batroolka leh oo ujeedadoodu tahay inay daboolaan baahida sii kordheysa ee adduunka ee xallinta tamar badan oo nadiif ah.
Shell waxay leedahay laba qaybood oo ah kaydka - Saamiyada, iyo saamiyada B oo labaduba lagu kala iibsado New York (NYSE), London (LSE), iyo Euronext Amsterdam sida (RDS-A) iyo (RDS-B).
RDS-A tagaa $ 36.39 +1.33 ( +3.79%), 1,350.20GBX (-0.27%), iyo € 15.08 (-0.34%) ee New York, London, iyo Euronext Amsterdam Stock suuqyada sarrifka siday u kala horreeyaan.
Gudaha NYSE, RDS-A xiran yahay at $ 36.39 leh mugga 6,286,185 iyo daboolka suuqa $ 139 bilyan.
LSE, RDS-A xiran yahay at 1,353.80GBX leh mugga 758,050 iyo daboolka suuqa £ 55,522.58 milyan.
Markaad joogtid Euronext Amsterdam, RDS-A xiran yahay at € 15.13 oo leh mugga 2,338,440 iyo daboolka suuqa .115.035 XNUMX bilyan.
RDS-B tagaa $ 34.65 +0.95 ( +2.82%), 1,299.00GBX -10.80 (-0.82%), iyo € 14.39 -0.06 (-0.42%) on New York, London, iyo Euronext Amsterdam Stock Exchange.
Gudaha NYSE, RDS-B xiran yahay at $ 33.70 oo leh mugga 2,952,608 iyo daboolka suuqa $ 139.667 bilyan.
LSE, RDS-B xiran yahay at 1,309.80GBX oo leh mugga 731,603 iyo daboolka suuqa £ 48,543.60 milyan.
Markaad joogtid Euronext Amsterdam, RDS-B xiran yahay at € 14.446 oo leh mugga 20,360 iyo daboolka suuqa .53.441 XNUMX bilyan.
Guddiga Royal Dutch Shell plc. ku dhawaaqay an saami ku meel gaar ah marka la eego rubuca saddexaad ee 2021 ee US $ 0.1665 halkii Saami caadi ah (“A Share”) iyo B share caadi ah (“B Share”).
Saamiga lacagta Saamiyada A waxaa lagu bixin doonaa, euro ahaan, in kasta oo dadka haysta A A saamiyada ay awoodi doonaan inay doortaan inay ku helaan saami -qaybsiga doolarka Mareykanka ama lacagta Ingiriiska.
Saami -qeybsiga lacagta caddaanka ah ee saamiyada B waxaa lagu bixin doonaa, sida caadiga ah, rodol, in kasta oo dadka haysta saamiyada B ay awoodi doonaan inay doortaan inay ku helaan saami -qaybsiga doolar ama yuuro.
Lacagta Sterling pound iyo lacagaha saami qaybsiga u dhiganta Euro ayaa lagu dhawaaqi doonaa Diseembar 3, 2021.
Eeg kuwan 15ka Kayd ee ugu Sarreeya ee Bixiya Bixiyayaasha Billaha ah & ETF -yada
Chevron waa mid kale oo ka mid ah shirkadaha shidaalka iyo tamarta ee adduunka oo ujeedadoodu tahay inay bixiyaan tamar la isku halleyn karo, la awoodi karo, oo nadiif ah.
Shirkadda stock waa kayd kale oo saliid badan leh oo wax-soo-saar sare leh si loo iibsado iyada oo ay jirto fowdada suuqa saliidda. Waxay ka ganacsataa isweydaarsiga saamiyada ee New York sida (NYSE: CVX) at $ 89.87+2.42 (+2.77%) oo leh mugga 1,018.
CVX waxay hore u xirnayd $ 87.45, oo ka sarraysay awoodda Exxon Mobil oo leh dabool suuq $ 173.001 bilyan.
Maamulka Chevron wuxuu jaray kharashaadkii raasamaalka ee 2021 48% waana kharashyada hawlgalka 12%. Waxay sidoo kale hakisay barnaamijkeedii dib -u -iibsiga saamiyada si loo hubiyo in saami -qaybsiga 6.1% uu yahay mid aan la taaban. Waxayna heshay Noble Energy bishii Oktoobar 2021.
Intaa waxaa sii dheer, Oktoobar 28, 2021, Shirkadda Chevron waxay ku dhawaaqday saami -qaybsiga saddex -biloodle ah ($ 1.29) saami kasta, oo la bixin karo Diisambar 10, 2021.
Teekay Tankers Ltd. waa adeeg badeed iyo shirkad shidaal oo bixisa gaadiidka saliidda iyo tamarta maraakiibtooda maraakiibta maraakiibta ah ee dhexdhexaadka ah. Tani waxay ka dhigaysaa isku -xidh aad muhiim ugu ah silsiladda sahayda tamarta adduunka.
Waxay ku shaqaystaan ​​ka ganacsiga suuqa booyadaha, iyada oo loo marayo muddada gaaban ama muddada dhexe qandaraasyada qiimaha jaban.
Teekay Tankers waxay ku ganacsadaan isweydaarsiga saamiyada ee New York sida (TNK). TNK ayaa tagta $ 11.52 +0.29 ( +2.58%) leh mugga 408,526.
Intaa waxaa sii dheer, saamiyadii hore ayaa loo xidhay $ 11.23 oo leh dabool suuq $ 388.224 million.
Bishii Nofeembar 13, 2021, Teekay Tankers waxay soo saartay natiijooyinkeedii dakhli ee rubuc-saddexaad 2021 waxayna muujisay saamaynta culus ee coronavirus-ku ku yeeshay sahayda saliidda.
Höegh LNG waa shirkad isku dhafan oo kaabayaasha LNG ah oo bixisa adeegyada gaadiidka LNG, dib u soo celinta LNG, xalalka terminal, iyo adeegyada maaraynta maraakiibta gudaha ee aduunka oo dhan. Shirkaddu waxay ka kooban tahay Höegh LNG Holdings iyo Höegh LNG Partners.
Höegh LNG waxay xarunteedu tahay Norway, iyo joogitaanka Singapore, USA, UK, Indonesia, in la xuso dhowr.
Waxaad iibsan kartaa ama iibin kartaa saamiyada Höegh LNG Holdings Limited ee suuq -geynta Oslo (HLNG), halka Höegh LNG Partners LP, ay ku qoran tahay New York Stock Exchange sida (HMLP).
HLNG waxay ku ganacsataa 13.76 Nok -0.14 (-1.01%) oo leh mugga 4,192. Waxay leedahay mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya dakhliga saami kasta. Tani waxay muujinaysaa in ganacsiga shirkaddu uu kobcayo oo uu soo saarayo lacag ka badan inta ay dib u maalgashan karto ama dib ugu celin karto saamileyda.
Intaa waxaa sii dheer, saamiyadu waxay leedahay qiime xiritaan hore NOK13.90 leh dabool suuq NOK 1,049.22B.
Baro Sida Lacag Loogu Sameeyo 50000 oo Doollar Sannadka 2021: Hagaha Tallaabo-Tallaabo ah
TORM waa shirkad gaadiid wax soo saarka batroolka deenishka ah. Waa mid ka mid ah kuwa xambaara alaabooyinka saliidda la safeeyey sida baatroolka, shidaalka diyaaradda, naphtha, iyo saliidda naaftada. Waxay ka hawlgashaa maraakiibta maraakiibta ee cabbirkoodu kala duwan yahay 35,000-114,000 dwt.
TORM waxay leedahay laba liis oo ku yaal Nasdaq Copenhagen iyo NASDAQ ee New York sida TRMD. Saamigu wuxuu ka ganacsadaa $ 7.41 +0.11 ( +1.51%), oo leh mugga 24,447.
Intaa waxaa sii dheer, TRMD hore ayaa loo xiray $ 7.30 leh dabool suuq $ 538.815M
Bishii Nofeembar 11, 2021, TORM PLC waxay ku dhawaaqday natiijooyinkeedii rubuc-saddexaad ee 2021 halkaas oo ay ku dhawaaqeen saami-qeybsiga caadiga ah ee USD 63.2m, oo u dhiganta USD 0.85 saami kasta.
Lacag -bixinta ayaa la filayaa 10 -ka Sebtember 2021 saamileyda diiwaanka 27 -ka Ogosto 2021, iyadoo taariikhda saami qaybsiga hore on 26 August 2021.
ConocoPhillips waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee madaxbanaan E&P ee ku dhisan wax soo saarka iyo kaydka la xaqiijiyay.
Shirkadda waxaa ka go'an sahaminta hufan oo wax ku ool ah iyo soo saaridda saliidda iyo gaaska dabiiciga ah iyada oo loo marayo dadaalkeeda hal -abuurnimo iyo iskaashi.
Sidaa darteed, iibsigii ugu dambeeyay ee Concho Resources wuxuu u dhigi doonaa soo saaraha dooxada Permian ee ugu weyn.
ConocoPhillips saamiyada guud wuxuu ku qoran yahay New York Stock Exchange sida (COP) oo ka ganacsada $ 39.97 +0.70 ( +1.78%) oo leh mugga 12,459,037.
Intaa waxaa dheer, COP waxay leedahay qiime xiritaan hore $ 39.27 iyo daboolka suuqa $ 42.688 bilyan. Hantidu waxay leedahay saami lacageed oo la bixin karo oo ah $ 0.43 saami kasta.
Helitaanka Concho Resources, daboolka suuqa ayaa la filayaa inuu ku kordho $ 10.9 bilyan.
Talos Energy waa shirkad tamarta badda ka madax bannaan oo diiradda saarta sahaminta iyo gaaska iyo wax -soo -saarka Gacanka Mexico ee Mexico iyo xeebaha Mexico.
Shirkadu waxay isticmaashaa waayo -aragnimadeeda sannado ee maraakiibta xeebaha, iyo xooga dheelitirka sahaminta cusub, horumarinta, iyo hagaajinta hantida si ammaan ah oo xilkasnimo leh loo horumariyo ilaha tamarta.
Salos Energy wuxuu ku ganacsadaa isweydaarsiga saamiyada ee New York sida (TALO) at $ 8.80 +0.22 ( +2.56%) oo leh mugga 683,266.
TALO ayaa hore loo xiray $ 8.58 leh dabool suuq $ 642.664 million. Natiijo ahaan saamiga PE ee hooseeya, TALO waxay liistada ka dhigtaa mid ka mid ah kaydka saliidda ugu fiican ee la iibsado.
Baro Sida Loo Helo Lacag Suuqa Suuqa: Tilmaan Buuxo.
EOG Resources waa mid ka mid ah soo-saareyaasha saliidda ee ugu weyn Koonfurta Texas, oo sidoo kale caan ku ah sahaminta hydrocarbon. Iyada oo xarunteedu tahay Houston, Texas, EOG Resources waxaa loo yaqaanaa inay isticmaasho tignoolajiyada sare iyo xogta weyn si ay u caawiso hawlaheeda qodista.
Saamiyada shirkadu waxay u ganacsataa sida (EOG) ee suuq -geynta New York Stock $ 47.82+1.29 (+2.77%) oo leh mugga 9,323,479.
Intaa waxaa sii dheer, EOG hore ayaa loo xiray $ 46.53 wuxuuna leeyahay dabool suuq $ 27.897 bilyan. Dhamaadka sanadka 2019, Kheyraadka EOG wuxuu kordhiyay heerka saami qeybsiga ilaa 31%.
Waxay sidoo kale soo saareen $ 1.9 bilyan oo socod lacag caddaan ah oo lacag la'aan ah oo lagu maalgaliyay $ 588 milyan oo saami -qaybsiga ah iyo hawlgabnimada $ 900 milyan oo deyn ah.
Canacol Energy waa shirkad madaxbannaan oo caadi ah oo sahaminta gaaska dabiiciga ah ku leh Kolombiya.
Sida runta ah, shirkadu waxay mas'uul ka tahay bixinta 20% baahida gaaska dalka waxayna ku saleysan tahay Kanada.
Saamiyada shirkada waxaa lagu kala iibsanayaa isweydaarsiga saamiyada ee Toronto sida CNE, OTCQX ee Maraykanka sida CNNEF, Bolsa de Valores de Colombia sida CNEC, iyo Bolsa Mexicana de Valores sida CNEN
Isweydaarsiga saamiyada ee Toronto, saamiyada (CNE) ganacsiyada at CAD 4.01 +0.02 ( +0.5013%), oo leh mugga 2,525, iyo daboolka suuqa CAD 721.239 milyan.
Gudaha OTCQX, saamiyada (CNNEF) ganacsiyada at $ 3.1100 -0.0500 (-1.58%) oo leh mugga 512 iyo daboolka suuqa $ 552.317 million.
Intii lagu jiray Bolsa de Valores de Colombia, kaydka (CNEC) ganacsiyada at 10,960.00 COP -240.00 -2.14% oo leh mugga 46,220, iyo daboolka suuqa 1.971T.
Bishii Sebtember 20, 2022, Canacol energy waxay ku dhawaaqday saddex lacag -bixin oo saami -wadaag ah $ 0.052 saami kasta.
Marka, waxaad dhihi kartaa kaydku waa a khatar yar, abaal-marin sare kayd. Taasina waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah kaydka saliidda ugu fiican ee la iibsado.
Kayd kale oo saliid ah oo ku jira liistada kaydka saliidda ee ugu fiican ee la iibsado waa kaydka tamarta ee Diamondback. Diamondback waa shirkad madaxbannaan oo saliid iyo gaas dabiici ah oo xarunteedu tahay Midland, Texas.
Shirkaddu waxay diiradda saareysaa soo iibsiga, horumarinta, iyo sahaminta kaydka saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee Biyaha Permian ee Galbeedka Texas.
Waxaad iibsan kartaa ama iibin kartaa saamiyada Diamondback Energy ee suuq -geynta NASDAQGS FANG at $ 41.57 +1.05 ( +2.59%) oo leh mugga 553,294.
Intaa waxaa sii dheer, kaydkii hore ayaa loo xiray $ 40.52 wuxuuna leeyahay dabool suuq $ 6.524 bilyan.
Bishii Nofeembar 2, 2021, Diamondback Energy waxay ku dhawaaqday warbixinteedii maaliyadeed ee rubuc-saddexaad ee 2021 halkaas oo ay ku dhawaaqeen saami-qaybsi lacageed $ 0.375 saamigii la bixin lahaa Noofambar 19, 2021.
Eeg kuwan 13 Badeecadaha Hantida Ugu Fiican
Parsley Energy waa shirkad madaxbannaan oo saliid iyo gaas dabiici ah oo diiradda saarta qeybaha ugu badan ee Barkadda Permian oo ah mid ka mid ah maraakiibta shidaalka ugu qanisan adduunka.
Sababtoo ah ka go'naanshahooda ku aaddan hababka ugu wanaagsan, waxay adeegsadaan tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay si loo fududeeyo geeddi -socodka qodista. Hal -abuurnimada teknolojigu waxay u saamaxaysaa warshadaha inay kordhiyaan saxnaanta, ogaadaan oo wax ka qabtaan welwelka si dhakhso leh, iyo inay yareeyaan waqtiyada wax -soo -saarka.
Waxaad iibsan kartaa ama iibin kartaa saamiyada Parsley Energy ee suuq -geynta New York Stock Exchange (PE) at $ 12.99 +0.38 ( +3.01%) oo leh mugga 703,165.
Qiimihii hore ee xiritaanka saamigu wuxuu ku yaal $ 12.61 wuxuuna leeyahay dabool suuq $ 5.359 bilyan.
Bishii Oktoobar 28, 2021, Parsley Energy Inc. waxay ku dhawaaqday natiijooyinkeedii maaliyadeed ee rubuc-saddexaad ee 2021 halkaas oo ay ku dhawaaqday inay bixisay rubuc rubuc $ 0.05 saami kasta on September 18, 2021.
Waxay sidoo kale ku dhawaaqeen saami qaybsiga 4Q20 ee $ 0.05 saami kasta oo la bixin karo Diseembar 18, 2021.
Renewable Energy Group Inc. waa soo -saare caalami ah iyo alaab -qeybiyeyaal shidaal la cusbooneysiin karo sida biodiesel, naaftada la cusbooneysiin karo, kiimikooyinka, iyo alaabada kale.
Shirkadu waxay biofuel u beddelaysaa wax ka caawiya hagaajinta deegaanka iyo kobcinta macaashka macaamiisha.
Sidoo kale, xalalkoodu waxay noqdeen ikhtiyaarro ka wanaagsan naaftada batroolka sababta oo ah waxay soo saaraan qiiqa kaarboonka si aad ah u hooseeya.
Kooxda Tamarta Cusboonaysiinaysa saamiyada guud wuxuu ka ganacsadaa Nasdaq Global Select sida (REGI) at $ 59.75 +0.09 (+0.15%) oo leh mugga 222,260.
Qiimaha xidhitaanka kaydkan waa $ 59.66, oo leh dabool suuqa $ Doolarka 2.35.
Isku-dubarid liiskan kaydka saliidda ee ugu wanaagsan ee la iibsan karo waa Whiting Petroleum Corp Stock. Whiting Petroleum Corp waa shirkad madax banaan oo sahamin shidaal iyo gaas ah.
Shirkadu waxay diiradda saareysaa sahaminta, iyo soo saarista badeecooyin kala duwan oo batrool iyada oo loo marayo boosaska ay ka ciyaaraan kheyraadka Bakken/Three Forks ee Waqooyiga Dakota iyo Montana.
Saamiyada shirkadu waxay u ganacsataa sida (WLL) ee suuq -geynta New York Stock Exchange $ 24.17 +1.06 ( +4.59%) oo leh mugga 682,050.
Intaa waxaa dheer, WLL waxay leedahay dabool suuq $ 919.698 million horena loo xiray $ 23.11.
Halkaan waxaa ah kaydka saliidda ee ugu fiican ee lagu iibsado jaleec degdeg ah.
Kaydka Shidaalka Price Change mugga Suuqa suuqa
Exxon Mobil (XOM) $ 38.89 +0.49 (1.27%) 25,289,154 $ 165 bilyan
Total (WADARTA SE) $ 43.82 +0.39 (+0.90%) 2,626,466 $ 115.027 bilyan
$ 139 bilyan
$ 139.667 bilyan
Chevron (CVX) $ 89.87 +2.42 (+2.77%) 1,018 $ 173.001 bilyan
Shirkadda Teekay Tankers Ltd (TNK) $ 11.52 +0.29 (+2.58%) 408,526 $ 388.224 million
Höegh LNG (HLNG) 13.76NOOQ -0.14 (-1.01%) 4,192 NOK 1,049.22 bilyan
TORM Plc. (TRMD) $ 7.41 +0.11 (+1.51%) 24,447 $ 538.815 million
ConocoPhillips (COP) $ 39.97 +0.70 (+1.78%) 12,459,037 $ 42.688 bilyan
Talos Energy (TALO) $ 8.80 +0.22 (+2.56%) 683,266 $ 642.664 million
Kheyraadka EOG (EOG) $ 47.82 +1.29 (+2.77%) 9,323,479 $ 27.897 bilyan
Canacol Energy (CNNEF) $ 3.1100 -0.0500 (-1.58%) 512 $ 552.317 million
Tamarta Diamondback (FANG) $ 41.57 +1.05 ( +2.59%) $ 41.57 +1.05 ( +2.59%) 553,294 $ 6.524 bilyan
Tamarta Tamarta (PE) $ 12.99 +0.38 (+3.01%) 703,165 $ 5.359 bilyan
Kooxda Tamarta La Cusboonaysiin karo (REGI) $ 59.75 +0.09 (+0.15%) 222,260 $ 2.35 bilyan
Shirkadda Whiting Petroleum Corp (WLL) $ 24.17 +1.06 (+4.59%) 682,050 $ 919.698 million
Dib -u -eegista Awoodda Arcadia 2022: Sidee u Shaqaysaa Awoodda Arcadia?
Hel kaadhadhka gaaska bilaashka ah maalmo yar gudahood| 15ka Dariiqo ee ugu Wanaagsan 2022
Barnaamijyada Qiimaha Gaaska Jaban ee 2022 | loogu talagalay adeegsadayaasha Android iyo iPhone
Kaydka Saliida iyo Gaaska Sare ee Q4 2022
Orji Sophia waa saxafiyad maalgashi iyo khabiir maaliyadeed oo gaar ah. Waxay diiradda saareysaa inay dadka ka caawiso inay gaaraan go'aannada maaliyadeed ee saxda ah iyo inay abuuraan fikrado ganacsi oo faa'iido leh iyagoo siinaya adeegyo la-talin ganacsi oo yaryar iyo inay si fudud u fahmaan mowduucyada maaliyadeed ee fudud. Xirfaddeeda xirfadeed waxay ku jirtaa inay ogaato xeelado koritaan oo hoose oo ku jira heerar kala duwan ee meherad iyo sare u qaadida xeeladahaas si loo soo saaro natiijooyin. Waqtigan xaadirka ah, waxay wax ka qortaa maaliyadda shaqsiga, canshuuraha, caymiska, maalgashiga, hal -abuurka, bangiyada, iyo hanti abuurka. Waxay si gaar ah ugu raaxaysataa barashada maalgashiga/ganacsiga saamiyada, xisaabta ka dambeysa maaliyadda, iyo daryeelka eygeeda.
ACN Miyuu Xalaal Yahay Ama Fadeexad Kale Oo Suuqgeynta Multilevel Ah?